Xuquuda Sawirrada waxaa leh Maxamed Sheekh Nuur
Waxaa loo dhigi doonaa koob hal maalin ah oo ujeedadiisu tahay in lagu maamuuso dib u howl-gelinta garoonka Muqdisho oo ah hoyga xulka qaranka Soomaaliya. Wasiiradda dhallinyarada iyo cayaaraha Marwo Khadiija Maxamed diiriye iyo guddoomiyaha xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab yaa goobta cayaarta kusoo dhaweyn doona madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed oo laadi doona kubbada ugu horreysa cayaarta.
Garoonka kubbadda cagta Muqdisho oo ah guriga xulka qaranka Soomaaliya, waxaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1977-kii waxaana dalka Soomaaliya u dhistay dowladda Shiinaha. Garoonku wuxuu marti geliyay cayaaro badan oo isugu jira kuwo qaaradeed, kuwo heer caalami ah, cayaraha bariga iyo bartamaha Africa iyo sidoo kale cayaaraha Carabta. Cayaartii ugu horreysay ee lagu qabtay garoonka Muqdiho waxay dhex martay qaranka Soomaaliya iyo koox ka socotay dalka Shiinaha oo la yiraahdo Leonen, wxaana ay ahayd cayaartii lagu furay garoonka. Sidoo kale tartankii CECAFA ee ugu horeeyay ee garoonka lagu qabtay wuxuu ahaa koobka qaramada ee CECACA.
Markaa kaddib tartamadu si caadi ah ayay ugasii dhacayeen garoonka Muqdisho, ilaa laga gaaray 2004-tii oo horyaalkii ugu dambeeyay lagu qabtay, waxaana horyaalkaas ku guuleysatay naadigii la oran jiray Banaadir Telecom oo hada loo yaqaano MCC. Tartankaas oo ay ka qeyb galeen 8 kooxood ayaa muddadii uu socday waxaa guud ahaan la dhaliyay 109 gool, waxaana gool dhalinta sanadkaas ku guuleystay cayaaryahan Maxamed Nuur Cabdi (Shaarkeey).